ကဲ ထုံးစံအတိုင်း မီးတွေကတော့ စပျက်လာပြီနော်။ | PTI Company Limited
ကဲ ထုံးစံအတိုင်း မီးတွေကတော့ စပျက်လာပြီနော်။
ဘယ်သူမဆို ပစ္စည်းတစ်ခုကို တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီးရင် စိတ်ချလက်ချတော့ သုံးချင်ကြတာပဲလေ။ ဒီလိုမျိုး ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင် သုံးလို့ရဖို့ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းကလည်း အရည်အသွေးပြည့်မီနေဦးမှ။ Service ကလည်းကောင်းဦးမှ။ ယုံကြည်ရလောက်အောင်လည်း နာမည်ရှိဦးမှ။
ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ သေချာတယ်။ ဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းမျိုးမဆို စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ပြီ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဝေးဝေးကရှောင်ကြပေတော့ လူကြီးမင်းတို့။
PTI ဆိုတာကလည်း ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်မယ့် ဂျင်နရေတာတွေ၊ မီးစက်တွေကိုသာ ရောင်းချပေးနေတာမလား။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလိုပဲ အခုတလော မီးကလည်း ကြိုကြားကြိုကြားပျက်လာပြီ။ မီးပျက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ မီးစက်မရှိရင် အင်မတန် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာမလား။ အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ မီးပျက်သွားတာတို့၊ deadline အမှီလုပ်ပေးရမယ့် အရေးကြီးအလုပ်တွေရှိနေချိန် မီးပျက်သွားတာမျိုးတို့ကြုံတဲ့အခါ မီးစက်အရံသင့်မရှိရင် မခက်ပေဘူးလား။
ဒါကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အရည်အသွေးကောင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ PTI မီးစက်တွေ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
🏠 No.128, Kanaung Minthar Gyi Road, East Dagon Industry Zone, Yangon 11451, Myanmar
☎️ CALL NOW: 09 4411 00200
🌐 Visit our Website: www.ptimyanmar.com
PTI Cartoon #1
Prime Time မီးစက် ဝယ်ဆောင်ထားစို့
AKSA ဟာ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မီးစက် Brand တစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲ?
webadmin Generator Knowledge
Newer PostAKSA ဟာ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မီးစက် Brand တစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲ?
With the ATS (Automatic Transfer Switch), you don’t have to worry about power cuts anymore.
Don’t let your peaceful life be disturbed by noises.
Why should all businesses have generators?
မီးစက် ဟိ(Heat)တက်တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?